Literatiora: kanto, tokony hampianarina any an-tsekoly ny riankalo | NewsMada
Literatiora: kanto, tokony hampianarina any an-tsekoly ny riankalo
32 taona lasa izay, natosiky ny aingam-panahy sy ny talentany Ranöe ka nanoratra… Tsy tononkalo na tantara foronina na koa fahalalana hatosaka ho an’ny mpianatra no nakorisan’ny peniny fa endri-panoratana vaovao. Io ilay antsoin’ny frantsay hoe « prose poétique ». Manankarena anefa ny teny malagasy ka ny hoe “riankalo” ny hitan’ity mpanoratra ity fa mifanaraka tsara amin’ilay endri-panehoam-pihetseham-po vaovao.
« Riankalo, fihaonan’ny tononkalo sy ny sombin-tantara, ahitana ireo sarin-teny rehetra fampiasa amin’ny tononkalo », hoy Ranöe. Ho an’ny mpifankatia, kanto raha atao riankalo ny taratasy alefa ho an’ilay olon-tiana. Azo anazavana hevitra sy andresena lahatra. Azo andokafana sy anoritsoritana zavatra amin’ny antsipiriany. Azo anehoana foto-pisainana sy izay mahakasika ny zavaboahary mbamin’ny tontolo iainana koa anefa ny riankalo.
Ho an-dRanöe, mibahan-toerana amin’ireo sanganasany ny tontolon’ny fitiavana. Miisa 70 ny riankalo efa vitany ka nivoaka ny taona 2002 ny boky voalohany ahitana ny ampahany. « Zedazeda », midika hoe miriorio na mitsangantsangana, ny lohateniny. Ireo mpiray faribolana aminy ao amin’ny Sandratra no mivoy sy maneho ny riankalo. Efa nivoaka ny boky ahitana ny angon-driankalon’izy ireo, mitondra ny lohateny hoe « Tsimandoa »,
Telo ny fikarohana natao tany amin’ny ambaratonga ambony mikasika ny riankalo, noforonin-dRanöe. Mbola tsy anisan’ireo endri-panoratana ampianarina any an-tsekoly anefa izy ity. Izay ny anton’ny famelabelaran-kevitra nataony, omaly teny amin’ny Akademia malagasy eny Tsimbazaza. “Kanto ary mahafehy ny fepetra tokony hampianarana azy any an-tsekoly ny riankalo”, hoy Ranöe.